Hatraiza ny risika hisamborana Coronavirus amin'ny fiaramanidina? Tsiambaratelo IATA
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Hatraiza ny risika hisamborana Coronavirus amin'ny fiaramanidina? Tsiambaratelo IATA
IATA: ambany ny loza ateraky ny jiro fampitana COVID-19
The Fikambanam-pitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA) naneho ny fihenan'ny fihenan'ny fampidirana COVID-19 miaraka amina tranga vaovao farany. Hatramin'ny nanombohan'ny taona 2020 dia 44 ny tranga Covid-19 notaterina izay ny fifindrana dia heverina fa mifandray amin'ny dia an-sidina (ao anatin'izany ny tranga voamarina, azo inoana ary mety hitranga). Nandritra io vanim-potoana io dia mpandeha 1.2 miliara no nanao dia lavitra.
“Ny loza ateraky ny mpandeha dia voan'ny COVID-19 raha eny ambony sambo no toa ambany dia ambany. Miaraka amin'ny 44 tranga mety hitranga voafaritra mifandraika amin'ny sidina amin'ireo mpitsangatsangana 1.2 miliara, tranga iray izany isaky ny mpandeha 27 tapitrisa. Ekenay fa mety ho ambanin-javatra izany fa na dia tsy nitaterana ny 90% aza ny tranga dia tranga iray isaky ny mpandeha 2.7 tapitrisa izany. Heverinay fa manome toky be ireo tarehimarika ireo. Ankoatr'izay, ny ankamaroan'ny tranga navoaka dia niseho talohan'ny nielezan'ny fisalobonana tarehy, "hoy ny Dr. David Powell, mpanolotsaina mpitsabo IATA.
Ny hevi-baovao momba ny antony mahatonga ny isa ambany dia avy amin'ny fanontana natolotry ny Airbus, Boeing ary Embraer an'ny fikarohana dinamika momba ny fluid computational (CFD) samihafa ataon'ny mpanamboatra tsirairay amin'ny fiaramanidiny. Na dia tsy nitovy aza ny fomba fiasa dia samy nanamafy ny simika amin'ny antsipiriany fa ny rafitra fiaramanidina fiaramanidina dia mifehy ny fivezivezin'ny sombintsombiny ao anaty tranony, mametra ny fiparitahan'ny viriosy. Ny angona avy amin'ny simulation dia nitondra valiny mitovy amin'izany:
Ny rafitra fiaramanidina fiaramanidina, ny sivana masiaka avo lenta (HEPA), ny sakana voajanahary amin'ny seza, ny fidinan'ny rivotra midina, ary ny tahan'ny fifanakalozana rivotra avo lenta dia mampihena ny risika amin'ny fifindran'ny aretina amin'ny sambo amin'ny fotoana mahazatra.
Ny fanampiana ny fanaovana saron-tava ao anatin'ny olana amin'ny areti-mandoza dia manome fiarovana fanampiny fanampiny sy manan-danja, izay mahatonga ny fipetrahana eo akaiky eo amin'ny kabine fiaramanidina ho azo antoka kokoa noho ny ankamaroan'ny tontolo anaty trano.
Ny fanangonana angon-drakitra IATA, ary ny valin'ny fanahafana samihafa, mifanaraka amin'ireo isa ambany voalaza ao amin'ny fanadihadiana navoakan'ny Freedman sy Wilder-Smith tao amin'ny Gazetin'ny fitsaboana amin'ny dia. Na dia tsy misy fomba hametrahana isa marina aza amin'ny tranga misy ifandraisany amin'ny sidina, ny fahatongavan'i IATA ho an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka sy ny manampahefana misahana ny fahasalamam-bahoaka miaraka amin'ny fandinihana lalina ny literatiora misy dia tsy nanome porofo fa ny fandefasana an-tsambo dia amin'ny lafiny rehetra na iraisan'ny rehetra. Ankoatr'izay, ny fanadihadiana an'ny Freedman / Wilder-Smith dia manondro ny fahombiazan'ny fanaovana sarontava amin'ny fihenan'ny risika bebe kokoa.
Fomba fanatonana ny fepetra fisorohana
Ny fanaovana saron-tava an-tsambo dia natolotry ny IATA tamin'ny volana Jona ary fepetra iraisan'ny ankamaroan'ny zotram-piaramanidina hatramin'ny namoahana sy ny fampiharana ny Takeoff Guidance avy amin'ny International Civil Aviation Organisation (ICAO). Ity torolàlana ity dia manampy fiarovana marobe eo an-tampon'ny rafitra mikoriana izay efa miantoka tontolo iainana azo antoka miaraka amin'ny risika tena ambany amin'ny fampitana aretina.
“Ny torolàlana feno ataon'ny ICAO momba ny dia an-dranomasina azo antoka ao anatin'ny krizy COVID-19 dia miankina amin'ny fiarovana maro, izay misy ny seranam-piaramanidina sy ny fiaramanidina. Ny fanaovana sarontava dia iray amin'ireo hita be indrindra. Saingy ny filaharana an-tsakany sy an-davany, ny fanodinana tsy misy fifandraisana, ny fihenan'ny fihetsiketsehana ao an-kabine, ary ny serivisy an-tsambo notsorina dia anisan'ny fepetra marobe raisin'ny indostrian'ny fiaramanidina hitazomana ny fandosiran'ny fiaramanidina. Ary io dia eo an-tampon'ny zava-misy fa ny rafitra mikoriana dia natao hialana amin'ny fihanaky ny aretina miaraka amin'ny taha ambony amin'ny rivotra sy ny tahan'ny fifanakalozam-bola ary ny fanivanana tena mahomby amin'ny rivotra voaverina, ”hoy i Powell.
Ny toetra amam-pahaizana momba ny famolavolana fiaramanidina dia manampy fiarovana fanampiny izay mandray anjara amin'ny fahakelezan'ny fampitana inflight. Anisan'izany ireto:
Fifaneraserana mivantana mifanatrika rehefa miatrika mandroso sy mihetsika kely ny mpandeha
Ny vokatry ny seza-seza dia miasa ho toy ny sakana ara-batana amin'ny fivezivezin'ny rivotra avy amin'ny andalana iray mankany amin'ny iray hafa
Ny fampihenana ny fikorianan'ny rivotra mandroso, miaraka amina endrika mikoriana izay mitodika midina hatrany amin'ny valindrihana ka hatrany amin'ny gorodona
Ny tahan'ny rivotra madio be miditra ao anaty trano. Air dia atakalo in-20-30 isan'ora amin'ny ankamaroan'ny fiaramanidina, izay ampitahaina amin'ny habaka birao antonony (salan'isa 2-3 isan'ora) na sekoly (isaky ny 10-15 isaky ny adiny).
Ny fampiasana sivana HEPA izay misy taham-pahombiazan'ny fanesorana bakteria 99.9% / otrik'aretina izay manome antoka fa tsy làlana fampidirana mikraoba ny famatsian-drivotra miditra ao anaty trano.
Ny fifandraisan'ireo lafin-javatra famolavolana ireo tamin'ny famoronana tontolo iainana tsy dia misy ahiana dia nanjary takatry ny saina fa tsy nohaingoina mialoha ny fanahafana CFD nataon'ireo mpanamboatra lehibe telo ao amin'ny tranokalan'ny fiaramanidiny tsirairay avy. Ireto manaraka ireto dia manasongadina ny fikarohana nataon'ny mpanamboatra:
Airbus dia nampiasa CFD mba hamoronana simika tena marina ny rivotra ao anaty tranokely A320, hahitana ny fihenan'ny vongan-drano vokatry ny kohaka ao anaty onjam-peo. Ny fikajiana nikajiana toy ny hafainganan'ny rivotra, ny lalana ary ny mari-pana amin'ny teboka 50 tapitrisa ao anaty trano, hatramin'ny 1,000 heny isan-tsegondra.
Airbus avy eo dia nampiasa fitaovana mitovy amin'izany hanodinana ny tontolo tsy fiaramanidina, miaraka amina olona maromaro mitazona elanelana 1.8 metatra eo anelanelany. Ny vokatr'izany dia ambany kokoa ny mety ho fiparitahana rehefa mipetraka mifanila amin'ny fiaramanidina noho ny mijanona enina metatra miala amin'ny tontolo toy ny birao, efitrano fianarana na fivarotana enta-madinika.
"Taorian'ny fanahafana marobe sy feno pitsopitsony amin'ny fampiasana ny fomba siantifika marina indrindra misy, dia manana angon-drakitra mivaingana izay manambara fa ny kabinin'ny fiaramanidina dia manolotra tontolo azo antoka kokoa noho ny habakabaka anaty trano", hoy i Bruno Fargeon, Airbus Engineering ary ny mpitarika ny Airbus Keep Trust amin'ny Air Travel Initiative. "Ny fomba fivezivezin'ny rivotra, voasivana ary nosoloina fiaramanidina dia miteraka tontolo tsy manam-paharoa izay anananao fiarovana mitovy amin'ny hipetrahanao enina metatra amin'ny tany."
Amin'ny alàlan'ny CFD, ireo mpikaroka ao amin'ny Boeing dia nanara-maso ny fomba nifindran'ny poti-kohaka sy ny fisefoana manodidina ny tranon'ny fiaramanidina. Ny tranga isan-karazany dia nodinihina, anisan'izany ny mpandeha mikohaka miaraka sy tsy misy sarontava, ny mpandeha mikohaka miorina amin'ny seza isan-karazany ao anatin'izany ny seza afovoany, ary ny fahasamihafana isan-karazany eo amin'ny rivotra any ivelany (fantatra amin'ny hoe gaspers) etsy sy eroa.
"Ity fakan-tahaka ity dia namaritra ny isan'ny sombin-kohaka niditra tao amin'ny toeram-pisefoanan'ireo mpandeha hafa", hoy i Dan Freeman, lehiben'ny injenieran'ny Initiative Travel Initiative an'ny Boeing. “Nampitahainay ny toe-javatra mitovy amin'izany amin'ny tontolo hafa, toy ny efitrano fihaonamben'ny birao. Miorina amin'ny isa an'habakabaka an'habakabaka, ny mpandeha mipetraka mifanila amin'ny fiaramanidina dia mitovy amin'ny mijoro mihoatra ny fito metatra (na roa metatra) eo amin'ny sehatry ny fananganana mahazatra. ”
Nampiasa ny CFD, ny reniranon'ny rivotra ary ny maodely fanaparitahana droplet voamarina tamin'ny fanandramana tontolo iainana ambaratonga feno, i Embraer dia nanadihady ny tontolon'ny kabinetra mieritreritra mpandeha mikohaka amin'ny seza maro samihafa sy ny toetoetran'ny rivotra amin'ny fiaramanidina samihafa mba handrefesana ireo fiovana ireo sy ny vokany. Ny fikarohana nataon'i Embraer dia nahitana fa ny risika amin'ny fampitana an-tsambo dia ambany dia ambany, ary ny tena angon-drakitra momba ny fandefasana sidina izay mety nitranga dia manohana ireo zavatra hita ireo.
I Luis Carlos Affonso, filoha lefitra zoky ny injeniera, ny teknolojia ary ny paikady, Embraer, dia nilaza fa: "Ny filan'ny zanak'olombelona dia lavitra, hifandray ary hahita ireo olon-tiantsika. Raha ny marina, amin'ny fotoana toy izao dia mila bebe kokoa ny fianakaviantsika sy ny namantsika isika. Ny hafatray anio dia hoe noho ny haitao sy ny fomba efa napetraka dia afaka mandeha soa aman-tsara ianao - mampiseho izany ny fikarohana rehetra. Raha ny marina, ny tranon'ny fiaramanidina ara-barotra dia iray amin'ireo toerana azo antoka azo antoka na aiza na aiza mandritra io areti-mandringana io. ”
Ny fiarovana no laharam-pahamehana indrindra
Ity ezaka fikarohana ity dia mampiseho ny fiaraha-miasa sy ny fanoloran-tena ho an'ny fiarovana ny rehetra tafiditra amin'ny fitaterana an-habakabaka ary manome porofo fa azo antoka ny rivotra kabine.
Aviation dia mahazo ny lazany amin'ny fiarovana amin'ny sidina tsirairay. Tsy hafa noho ny manidina amin'ny fotoan'ny COVID-19 io. Ny fandalinana natao tamin'ny IATA farany teo dia nahatsikaritra fa ny 86% n'ny mpandeha faramparany dia nahatsapa fa ny fepetra COVID-19 an'ny indostria dia mitazona azy ireo ho voaro sy ampiharina tsara.
“Tsy misy fepetra bala-bala tokana ahafahantsika miaina sy mivezivezy soa aman-tsara amin'ny taona COVID-19. Saingy ny fampifangaroana ny fepetra apetraka dia manome toky ny mpandeha eran'izao tontolo izao fa ny COVID-19 dia tsy naharesy ny fahafahany manidina. Tsy misy tsy atahorana tanteraka. Fa raha 44 fotsiny ny tranga navoakan'ny fampitana COVID-19 mety hidiran'ny mpandeha 1.2 miliara dia toa mitovy sokajy amin'ny fahatapahan'ny varatra ny loza ateraky ny viriosy "hoy i Alexandre de Juniac, Tale Jeneraly sy CEO an'ny IATA. .
“Ny fikarohana dinamika momba ny tsiranoka an-tsokosoko ataon'ireo mpanamboatra fiaramanidina dia mampiseho fa ny fampifangaroana ireo endrika famolavolana misy ny fiaramanidina miaraka amin'ny fanaovana sarontava dia miteraka tontolo iainana ambany noho ny fampitana COVID-19. Toy ny mahazatra, ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, ny mpanamboatra ary ny orinasa rehetra tafiditra amin'ny sidina fiaramanidina dia hotarihin'ny siansa sy ny fanao tsara indrindra manerantany mba hitandroana ny fandosiran'ny mpandeha sy ny ekipazy, ”hoy i de Juniac.
Ahoana no ahafahan'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany tafavoaka velona amin'ny Coronavirus
Tonga tsena fivahinianana voalohany mankany Tanzania i Frantsa